कांग्रेस महाधिवेशनको महाभारत
काठमाडौं– काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशनको मिति टुंगो लगाएको छ । आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समतिको बैठकले आगामी फागुन २० देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्नेनिर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए । बैठकले पार्टीको अधिवेशनको गाउँ, नगर, निर्वाचन क्षेत्र र ज..
एमालेलाई यसकारण चाहियो प्रधानमन्त्री : प्रदीप ज्ञवाली
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि हामीले मुख्य राजनीतिक शक्ति एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने मान्..
चिनियाँ नाकामा भारतविरुद्ध नारा–जुलुस गर्दा…
नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ नेपालको पहिलो संविधान हो । त्यो संविधान कति पूर्ण, कति अप..
के ओलीले रकेर्ड तोड्लान् ?
काठमाडौं– संविधान जारीपछि सहमतिको सरकारका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको चार दिन बित्दा पन..
एमाले सभासद् भन्छन् : ओली नेतृत्व सरकार, कांग्रेस सभासद् भन्छन् : हुन्न–हुन्न
काठमाडौं– दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसँगै ठूलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसले पहिलो सरकार..
काठमाडौं– राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकारका लागि आव्हान गरेको तीन दिन वितिसकेको छ । भारतीय दवावकावीच जोखिम मोलेर संविधान जारी गर्न सफल भएका प्रमुख दलवीच सहमतिको सरकार गठन गर्ने गृहकार्यमा भने दुरी बन्दै गएको छ । प्रमुख दलवीच १६ बुँदे सहमति गर्दा भएको भनिएको भद्रसहमति भए भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचार गरिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली ..
काठमाडौ –असोज गते १२ मंगलबार एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला थियो, जहाँ एमाले बरिष्ठ नेता एव्म पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मैथली भाषामा कविता वाचन गरे । तराई–मधेशबाट भेलामा सहभागी हुन आएका नेता–कार्यकर्ताले ताली पिटे । त्यसको अघिल्लो दिन एमाले प्रचार विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालले भोजपुरी उखान हाल र आफू ‘पोय..
कुन मन्त्री कति धनी ?
न्युयोर्कको बैंकमा पैसा राख्नेदेखि जेठाबाको जग्गा भोगचलन गर्नेसम्मको नालीबेली एकपटक कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपालका राजनीतिज्ञलाई व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘म विदेशी ह्विस्की खान प्रधानमन्त्री भएको ।’ भट्टराई आफू कहिल्यै सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सम्पत्ति कमाउनतिर लागेनन्, बरु सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई उनी बेलाबेला यस्..
काठमाडौं–तराई मधेशमा जारी आन्दोलनले मधेशी मोर्चाको राजनीतिक चर्चामा छ । आन्दोलन, वार्ता र भारत मोर्चासँग जोडिएर आउने गरेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा आन्दोलनमा छ तर ती भित्रका नेताहरुको मन अझै मिलेका छैन । फाइदा छैन, विवाद छ २०६३/०६४ सालमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन गरेर आन्दोलन गरेका मोर्चाले पछि त्यसबाट थ..
कांग्रेसमा भारतनिकट बन्नेको होडबाजी
काठमाडौं — हुन त प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमा भारतको एजेन्डामा नेताहरू हिँड्ने र कार्यान्वयन गराउन लागि पर्ने परम्परा नौलो होइन । ०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रिपरिषदमा छलफल गर्न लागेका गोप्य सूचना भारतलाई चुहाएको भन्दै दुई मन्त्रीलाई..
पुरुषोत्तम पौडेलका नौ विवाद, जसले मन्त्री पद गुम्यो
खेलकुदमन्त्री हुनासाथ पटक–पटक विवादको भुमरीमा परेका पुरुषोत्तम पौडेल अन्ततः प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामापत्र बुझाएर हिँड्न बाध्य भए । खेलकुदमन्त्रीको शपथ लिनासाथ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव युवराज लामासँग किचकिच गर्न थालेका मन्त्री पौडेलले पटक–पटकका विवादमा हार खाए । पछिल्लो समय उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनु..
के बाबुराम यी गल्तीबाट बच्लान् ?
नेपाली राजनीतिमा बौद्धिक नेताको कोटीमा पर्ने डा. बाबुराम भट्टराईको एमाओवादी परित्याग अनपेक्षित, असामान्य र दीर्घकालीन महत्त्वको कदम मानिएको छ । पुग्ने कहाँ हो, ठ्याक्कै बाबुरामले जनताले बुझ्ने भाषामा भनेका छैनन् । तर, झोला बोकेर उनी पेरिसडाँडाको ‘भत्केको’ घरबाट निस्केका छन् । बाबुराम कहाँ जान खोजेका हुन् ? सबैले जान्न चाहेका छन्..
राधा ज्ञवालीका १२ विवाद, जसले मन्त्री पद नै गुमाउनुपर्यो
काठमाडौं–विवादित छवि निर्माणपछि अन्तत उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले मन्त्री पद गुमाउनुपर्यो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई असोज १४ गते विहिवार पदमुक्त गरे । केही दिनअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणमा मन्त्री ज्ञवालीले अनियमितता गरेको भन्दै कारबाहीका लागि प्रधानम..
यस्तो हुन सक्छ बाबुरामको नयाँ पार्टी
काठमाडौं– पार्टीभित्र र बाहिर पनि नयाँशक्तिको बहस गराइरहेका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ९ असोजमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एकीकृत माओवादी र सांसदपद परित्यागको घोषणा गरे । यो घोषणासँगै भट्टराईले अब नयाँ पार्टी बनाउँदै छन् भन्ने अडकलबाजी सुरु भएको छ । तर, नयाँ पार्टी कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा भट्टराईले अझै आफू नजिककासँग पनि कुराकानी गरेक..
प्रा. डा. दाहालका संकटमोचनका ६ सूत्र
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै हालै नयाँ संविधान, ०७२ जारी भएको छ । यस ऐतिहासिक घटनाबाट नेपालका मित्र र बैरीहरू को हुन् भन्ने स्पष्ट पहिचान भएको छ । अहिले नेपालको नयाँ संविधानका सबै विरोधी एक कित्तामा उभिएका छन् । उनीहरू आफ्नो अभीष्ट पूरा गराउन छिमेकी मुलुक भारतलाई नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दीका लागि उक्स..
सुशील अब शीतल निवास कि सानेपा ?
काठमाडौं– राष्ट्रपति रामवरण यादवले शुक्रबार १५ असोजका लागि हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेपछि संविधानतः वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यसको एक हप्तामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली गर्नुपर्ने भएको छ । संसद्को अधिवेशन आह्वान भएसँगै ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री कोइरालाको बाटो कता ?’ भन्ने बहस पनि उठेको छ । ३ असोजमा जारी भएको ‘नेपालको स..
यो हो बाबुरामको राजनीतिक डायरी
२०२६ सालको एसएलसीमा बोर्ड फस्र्ट भएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न बाबुराम काठमाडौं आए । त्यतिबेला सरकारले जम्मा एक सय रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिन्थ्यो । किसान परिवारका बाबुरामले त्यो खर्चले मात्रै महिनाभरि चलाउन कठिन थियो । अमृत साइन्स कलेजबाट नजिकै कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको घरको छिडीको साँघुरो कोठामा मासिक ५० रुपैयाँमा बाबुराम र उनका ती..
प्रचण्ड र बाबुरामवीच दरबारिया र भारतीयको त्यो सनसनीपूर्ण आरोप प्रत्यारोप
०६१ वैशाखमा मैसुरमा भएको पोलिटब्युरो बैठकमा निकै असहज स्थिति देखापर्‍यो । मूल राजनीतिक एजन्डामा पूर्ण सहमति भएर पनि कतिपय नेताले प्रचण्डका केही कार्यशैलीगत कमजोरीको आलोचना गरे । पार्टीभित्रका समस्या छरपष्टसँग उजागर भए त्यहाँ । राति अबेरसम्म बहस भयो । तर कुनै संश्लेषणविना बैठक स्थगित भयो । जसका कारण नेताहरुबीच शङ्का बढ्यो र नमिठो..
कस्तो थियो प्रचण्ड–बाबुरामवीच ३० बर्ष लामो सम्बन्ध ?
माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध पर्याप्त आरोह–अवरोहले भरिएको छ । पार्टीबाहिर बाबुरामलाई प्रचण्डको ‘सर्वकालीन प्रतिस्पर्धी’का रूपमा लिइन्छ र उनीहरूको सम्बन्धमा आउने उतार–चढाव सधौू अखबारका ताता समाचार बन्छन् । पार्टीभित्र भने प्रचण्डको एकल वर्चस्व रहूदै आएको छ । यी दुईबीच एकता र विवाद भइ..
अब कहिले हुन्छ कांग्रेसको महाधिवेशन ?
काठमाडौं -‘नेपालको संविधान, ०७२’ लाई सबैभन्दा पहिले उपयोग गर्दै प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय इकाईसम्मको कार्यसमितिको म्याद बढायो । नयाँ संविधान घोषणा भएको भोलिपल्टै कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएर केन्द्रदेखि इकाईसम्मका कार्यसमितिको म्याद ६ महिना थप्यो । नयाँ संविधानमा आपतकालीन ..
नाकाबन्दी भए पनि देश बाँच्न सक्छन्
अर्गानिकपोनिको डी अल्मार अर्थात् क्युबाको हभाना नजिकैको कृषि परियोजना । यहाँ कामदारले थुप्रै ग्रामीण फार्म चलाएका छन् । यसैको आडमा बजार र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन् ।
सोनियालाई विदेशी भन्दै प्रधानमन्त्री बनाउन हुँदैन भन्ने मोदीले नेपाललाई किन दिए घातक सुझाव ?
उनले भारतीय कांग्रेस आईकी नेत्री सोनिया गान्धीलाई लक्षित गर्दै सो अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोनियाँ इटालिलयन नागरिक हुन् जो गान्धी परिवारको बुहारी बनेर भारतमा भित्रिएकी थिइन् । डेढ दशक अघि अर्थात १९९९ मा यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा मोदी त्यतिबेला भारतीय जनता पार्टीका महासचिव थिए । दुई वर्षपछि सन् २००१ मा उनी मूख्यमन्त्री बने ।
नाकाबन्दी गरे भारतलाई ४ खर्ब ४५ अर्ब घाटा
काठमाडौं – नेपालका राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माण प्रकृयामा भारतको दवाव नमानेपछि भारतले नेपालसंग व्यापारीक लफडा निकालेको छ । सहज रुपमा नेपाल भारत व्यापार भैरहेको बेला नेपालमा संविधान निर्माण भएपछि एकाएक सुरक्षाको कारण देखाउँदै तेलका ट्यांकर रोकेर राखेको छ । यसले भारतले नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी लगाउने आशंका गरिन थालिएको छ । भा..
ओलीका अगाडि ‘ब्रेकर’
काठमाडौं– भदौ पहिलो साता प्रकाशित साप्ताहिक एक म्यागजिनमा कभर स्टोरी आयोे– ढुक्क ओली । उपशीर्षकमा थियो, ‘सहमति पालना भए एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका लागि सिंहदरबार टाढा छैन ।’ कभर स्टोरीभित्र बक्समा ओलीको अन्तर्वार्ता छापिएको थियो र शीर्षक थियो, ‘म प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा आममाग बन्दै गएजस्तो छ ।’ अब तपाईं प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चि..
बी एन्ड बीका डाक्टर भन्छन्, मध्यपुर अस्पताल लापरबाही ढाकछोप गर्न खोज्दै छ
बी एन्ड बी अस्पतालका वरिष्ठ अर्थोसर्जन डाक्टर बाबुकाजी श्रेष्ठले अस्पताल र डाक्टरहरूले आफ्नो गल्ती छोप्न जे पनि बोल्न नहुने बताएका छन् । उनले भक्तपुरको मध्यपुर अस्पतालले आफूहरूलाई लगाएको आरोपको खण्डन गरेका हुन् । मध्यपुर अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि सिन्धुपाल्चोकका मिलन लामालाई बी एन्ड बी लगिएको थियो । घुँडामा सामान्य चोट लागेर ह..